5 तरीकाहरू Expo2020 ले दुबईको अर्थव्यवस्था बृद्धि गर्नेछ रोजगार - क्यारियर - यात्रा अर्थव्यवस्था
5 तरिका एक्सपोएक्सएनएमएम दुबई को अर्थव्यवस्था को बढावा देगा
दुबईमा सम्बद्ध ब्लगिंग
दुबई स्वास्थ्य चुनौती
[एआरफोर्म्स_पपअप शोर्ट_टाइप = 'पपअप' आईडी = 101 desc = 'यहाँ लागू गर्नुहोस्!' प्रकार = 'उडान' स्थिति = 'बायाँ' उचाइ = 'स्वत: चौड़ाई =' 800 'कोण =' 90 'bgcolor =' # ff6529 'txtcolor =' # ffffff ']
अक्टोबर 20, 2020, सम्म अप्रिल 10, 2021, संयुक्त अरब अमीरात को 2020 विश्व एक्सपो फेयर मा संस्कृति, सहयोग र नवाचार को एक उत्सव को लागि दुनिया को स्वागत गर्दछ।
यो पहिलो एक्सपो विश्व क्षेत्रमा आयोजित हुनेछ जुन पहिलो स्थान दुबईमा एक्सपो 2020 साइट हो। सम्मको मिति, 190 देशहरूको कुल संख्याले लाखौं मान्छे संयुक्त अरब अमीरातमा ल्याउन प्रदर्शनी कार्यक्रममा सहभागिताको पुष्टि गरेको छ। एक्सपो 2020 को लागी विषयवस्तु चयन गरिएको छ "मन जडान गर्दै, भविष्य सिर्जना गर्दै", उप-विषयवस्तुहरू स्थिरता, गतिशीलता र अवसर.
एक्स एक्स 2020 यात्रा 27 मा आधिकारिक बनी भयोth नोभेम्बर 2013, जब दुबई चियर्स, ज्यूबिलेशन र आतिशबाजी को बीच मा होस्ट को अधिकार जीता। अर्को दिन देशभर सबै शैक्षिक संस्थाहरूको लागि राष्ट्रिय अवकाश घोषणा गरिएको थियो। यो तपाइँलाई कसरी महत्त्वपूर्ण घोषणा र पछि महत्त्वपूर्ण छ भनेर घटनालाई मात्र दुबई तर सम्पूर्ण संयुक्त अरब अमीरात र मध्य पूर्व क्षेत्रमा मात्र होइन। यो एक सार्थक र स्थायी विरासत छोड्न को लागी कि एक्सपो आधिकारिक रूपमा ओभरमा पीडितहरूको लागि अन्तिम हुनेछ।
क्रेडिट: एक्सपो 2020 यूट्यूब
निम्न राष्ट्रहरूले एक्सपो 2020 मा आफ्नो सहभागिताको घोषणा गरेको छ:
मार्केटिङ र सञ्चार अभियानहरू प्रगतिमा छन् र प्रभावकारी रूपमा धेरै प्लेटफार्महरूमा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यहाँ सुपरस्टार र एक्सपोको धेरै स्वीकृतिहरू छन् विश्वव्यापी कम्पनी र संस्थाहरू पहिले देखि नै प्रदर्शन गरिएको छ उनीहरूको अभिनव र भविष्य हेर्दै पलायनहरू।
सबै पम्प र पेजन्ट्रीका अलावा एक्सपो एक्सएनमक्सले अर्थव्यवस्थालाई कसरी असर गर्नेछ, र यसले दुबईलाई कस्तो फाइदा ल्याउनेछ?
दुबई एक्सपो 2020 को आधिकारिक YouTube च्यानल
5 तरिका Expo2020 दुबई को अर्थव्यवस्था बढावा - एक्सपो 2020 YouTube च्यानल भ्रमण गर्नुहोस्
रोजगार सिर्जना गर्ने देशको क्षमता एक सूचक हो कि यसको अर्थव्यवस्थामा क्षेत्रहरू चलिरहेको छ र कार्यात्मक। एक पटक रोजगारीको अवसर सिर्जना भएपछि, त्यहाँ उपभोक्ताको विश्वास बढ्दै गएको छ खर्च बढेको छ। व्यवसायहरू चिसो र सामान्यतया बोल्दै, मानिसहरूले आर्थिक रूपमा स्थायी रूपमा अर्थतन्त्रमा सुधारिएका जीवनशैलीको आनन्द उठाउन सक्छन्। दुबई विश्व एक्सपो एक्सएनएमएक्स को मेजबान को रूप मा आधिकारिक रूपमा घोषित गरे पछि, अनुमान गरिएको थियो कि 2020, 277 को काम 149 को बीच एक्सएनएमएक्स मा एक्सएनएमएक्स मा एक अध्ययन मा आधारित छ।
यी कामहरू अर्थव्यवस्थाको सबै क्षेत्रहरूमा पर्यटन, खुदरा, वित्त, रियल एस्टेट, निर्माण, उड्डयन, अतिथि सत्कार, प्रौद्योगिकी, मीडिया र संचार, परिवहन, सुरक्षा, व्यापार र लगानी र धेरै धेरै। आधिकारिक एक्सोक्सएक्सक्सएक्स दुबई वेबसाइटको 'क्यारियर' खण्डमा, CV को पेश गर्नका लागि विकल्पहरू छन् र धेरै उपलब्ध अवसरोंका लागि आवेदन छन्। कार्य अवसरहरू पूर्व-एक्सपो उपलब्ध हुनेछ, एक्सपो र पोस्ट एक्सपो युगको समयमा।
एक्सपो 2020 सँग सबै जागिर खुल्ला हेर्नुहोस्
पहिले नै, हजारौँ विशेष गरी निर्माण, टेक्नोलोजी र ट्राफिक क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन् जुन कामका लागि अझै एक्सपोएनएनमक्सक्स साइट र अक्टोबर 2020 को तयारीमा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा रहेका छन्। विभिन्न विदेशी कामहरु को माध्यम ले धेरै विदेशी नौकरिहरु लाई पनि बनाइयो। जागिर खोज्नेहरूले इतिहास बनाउने अनुभवको भाग बन्नुमा यी अवसरहरूको फाइदा उठाउन सक्दछन्।
पर्यटन क्षेत्रमा बढावा गर्नुहोस्
संयुक्त अरब अमीरात अर्थव्यवस्थाको आर्थिक विकासमा पर्यटन एकदम आवश्यक अवयव हो। यस अनुसार दुबईको विभाग पर्यटन वाणिज्य विपणन, दुबई पर्यटक भ्रमणहरूमा गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा दुई प्रतिशत वृद्धि भएको छ। 2019 को पहिलो क्वार्टरको अन्त्यमा दुबईले 4.75 मिलियन अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो।
दुबई को विश्व पर्यटन मानचित्र मा मुख्य रूप देखि आकर्षणहरु जस्तै बर्ज खलीफा, पाम र बर्ज अल अरब होटल्स को साथ। पहिले नै, संयुक्त अरब अमीरातले औपचारिक रूपमा चार सांस्कृतिक युनेस्कोको विश्व विरासत साइटहरू छन्, अर्को आठ असाधारण सांस्कृतिक विरासत स्थलहरू।
दुबईको विश्व एक्सपो एक्सएनएमएक्सको होस्टिंगले एक्पोको समयमा र पछि पछि देशमा पर्यटकको आगमन बढाएको छ। अनुमानित 2020 लाख व्यक्ति एक्सएनएनएक्सको बीच दुबईमा एक्सपो 25 भ्रमण गर्न अपेक्षा गरिन्छth अक्टोबर 2020 र 10th अप्रिल 2021।
दुबई निगम पर्यटन र वाणिज्य विपणन (डीसीसीसीएम) को लागि सधैं सरकारको आप्रवासन एजेन्सीहरु संग हात मा काम गर्दै हुनुहुन्छ जसले पर्यटकहरू दुबईमा सजिलै संग भिसा पाउनका लागि आउन सजिलो बनाउँदछ। दुबई क्षेत्र मा मुख्य उड्डयन केन्द्र हो र यात्रीहरु को लागि एक आसान गन्तव्य हो जुन कुनै ग्लोबल गन्तव्य सम्म पुग्छ।
विश्व एक्सपो एक्सएनमक्सको साथ, दुबई पर्यटक भ्रमणको लागी अधिक आकर्षक भएको छ, र यसले देशको आर्थिक वृद्धिको लागि जीडीपीमा गति बढाउनेछ।
लगानीको अवसर बढ्यो
अर्थव्यवस्थाको विश्वास बलियो हुन्छ जब एक अर्थव्यवस्था जागिर हुन्छ र स्थायी छ। बहुसंख्यक व्यावसायिक सेवा फर्मको स्वतन्त्र डेटाको अनुसार, देशको भविष्यमा एक्सपो 2020 दुबईको दीर्घकालिक लगानीले एसई 122.6 अरब (USD 33.4 अरब) र 905,200 र 2013 को बीच 2031 नौकरी-वर्ष समर्थन समर्थन गर्नेछ।
दुबई एक्सपोएनएक्सक्सक्स को होस्ट गर्ने अधिकारहरूको कारण वैश्विक लगानीमा वृद्धि देखाइएको छ। एक देशमा आकर्षक हुन जब लगानी सुरक्षित छ, स्वागत, लाभदायक हुनको लागि प्रतिष्ठा छ। संयुक्त अरब अमीरात यो सबै र धेरै र सजिलैसँग खाजा र मध्य पूर्वी क्षेत्रमा खडा हुन्छ। व्यापार, खुदरा, रियल एस्टेट र विकास, वित्त, मनोरञ्जन, पर्यटन, निर्माण, आतिथ्य, विमानन र अन्य धेरै क्षेत्रका लागि खुला स्रोतहरू खुला छन्।
पहिले नै धेरै व्यवसायहरू दुबईमा शाखाहरू र आउटलेटहरू स्थानान्तरण गरी खोलिएका छन्। यी सबै परियोजनाहरूको लागि निर्माण चलिरहेको छ। ग्लोबल र बहुराष्ट्रीय संस्थाहरूले आफनो एक्सपोलाई आफ्नो आधिकारिक साझेदारहरूको साथ संकलन गर्दै गर्व गर्दछन् कि गर्वले आफ्नो मार्केटिंग र ब्रान्डिङ सामग्रीमा आफ्नो संस्थालाई प्रदर्शन गर्दछ। दुवै स्थानीय र विदेशी लगानीकर्ताहरु विश्वास हुन सक्छ कि विश्व एक्सपो 2020 दुबई मा आयोजित भएको छ, संयुक्त अरब अमीरात को अर्थव्यवस्था स्थिर छ, र उनको निवेश सुरक्षित र गारंटी को फिर्ती छ।
स्थानीय व्यापारमा वृद्धि र वृद्धि
दुबई धेरै व्यवसायहरुको घर हो, संयुक्त अरब अमीरात को राष्ट्रीय, मालिकहरु र विदेशी निवेशकों को मालिकहरु संग। त्यहाँ धेरै स्थानीय घर निर्माण गरिएका अवधारणाहरू छन् जुन दुबईको एक्सपो 2020 को होस्टिंगबाट लाभ उठाउन सकिन्छ। स्थानीय व्यवसायहरू हरेक अर्थव्यवस्थाको विकासको लागि ब्याकबोन हो, र धेरै सरकारहरूले इन्टेन्ग्रेसन र स्थानीय कम्पनीहरूको विकासलाई प्रोत्साहित गर्न इन्सुलेशन र बीउ स्टार्टर कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्छन्। घरपरिवार व्यवसाय, दुवै ठूला बहुमुखी र एसएमई को आश्रम र रियल एस्टेट, मिडिया, यात्रा र पर्यटन, अवकाश, खुदरा र सामान्य आर्थिक उद्योगमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी र लगानीमा ठूलो वृद्धि देख्न सकिन्छ।
त्यहाँ थुप्रै व्यवसायिक अवसरहरू छन् जुन यी क्षेत्रहरूमा नयाँ र उभरिरहेको बजारहरू पनि उपलब्ध छन्। स्थानीय ठेकेदारहरूको लागि धेरै राहतहरू बोली र प्रजनन प्रक्रियाहरू मार्फत पत्ता लगाउन सकिन्छ जुन किरणको अवसरका लागि उपलब्ध छन्। एक्स एक्सएक्सएनएमएक्सले नि: शुल्क प्रयोग गर्नका लागि आधिकारिक विश्वव्यापी अनलाइन बजारमा छ, जहाँ व्यवसायको अवसर दर्ता गरेर खोज्न सकिन्छ र विशेष गरी SME को लागि फायदेमंद छ। यो एउटा प्रभावशाली तरिका हो जुन स्थानीय व्यवसायको उद्देश्यले नयाँ इन्टरनेसनलले संसारलाई तिनीहरूले प्रस्ताव गर्न सक्ने कुरा देखाउन सक्छन्।
आधारभूत संरचनामा सुधार
एक्स एक्सक्सम्युक्सले दुबै दुबई र संयुक्त अरब अमीरातमा पूर्वाधारमा ठूलो विकास देखेको छ। एक्सपो साइटको लागि यातायात जस्तै सडक, मेट्रो लाइनहरू र पुलहरू विस्तार गरिएका र सुधारिएका छन्। होटलहरू, आवासहरू, स्वास्थ्य सेवा, र अन्य व्यावसायिक सुविधाहरू निर्माणमा थप परियोजनाहरू छन्।
जानकारी उपलब्ध छ कि साइट स्थान को अधिकांश भागहरु लाई पुन: उपयोग गर्न सकिन्छ, र यो स्थिरता पहल एक्सपो पछि जिल्ला 2020 को रूप मा जानिन्छ। एक्सपोको आधारभूत संरचना र सुविधाहरूको प्रबन्ध स्थिरता, गतिशीलता र अवसरको विषयमा जडान गरिनेछ। साइट जेबेल अली मा अल मकौम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दुबई वर्ल्ड सेन्ट्रल (डीडब्ल्यूसी) को नजिक छ र यो आगन्तुकहरु र निवेशकों को परिवहन को सुविधा दिनेछ।
एक्सपोको समयमा र पछि पछि पूर्वाधार अझै पनि प्रयोगमा हुनेछ। र व्यापार को लागि बढावा र एक पूरी को रूप मा अर्थव्यवस्था।
5 तरिका Expo2020 दुबई को अर्थव्यवस्था को बढावा देगा,
1day, 3-दिन, मासिक र मौसमी पासको भिन्नतामा टिकट जानकारी पहिले देखि नै छ। त्यहाँ युवा र विद्यार्थी छूट हुनेछ; र निर्धारणको व्यक्तिहरूको लागि निःशुल्क पहुँच, 65 र माथिका वयस्कहरू, र बच्चाहरू5वर्ष सम्म।
विश्व एक्सपो 2020 ले दुबईलाई सही प्रदर्शन र प्रतिष्ठा दिईयो यो स्थानीय र विदेशी हितधारक दुवै को लागी विश्वस्त विश्वस्ततालाई पूर्ति गर्न आवश्यक छ। यसले संयुक्त अरब अमीरातको नागरिक र नागरिकको समानताको गर्वको भावना पनि बढ्यो र सांस्कृतिक र आर्थिक विकासमा आवश्यक दीर्घकालीन विरासत छोड्न सक्नेछ।
लेख लेखिएको थियो,
द्वारा: थेरेसा आर फियानो
दुबई - संयुक्त अरब अमीरात
(मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, लेखक, सामग्री निर्माता)
लिंकडेनमा थेरेसा आर फियानोसँग जोड्नुहोस्